🥇 ▷ Xaqiiqda midabaysan ayaa mar kale la timid Ragga Madoow: Casuumada Caalamka ✅
Xaqiiqda midabaysan ayaa mar kale la timid Ragga Madoow: Casuumada Caalamka
Ragga Madoow: Casuumada Caalamku waa sharafta Muuqaalka MIB oo leh xaqiiq kor loo qaaday taasina waxay ku gaartaa aaladaha mobilada si ay u nuqulaan wixii Pokémon GO, ama dhawaanahan lagu soo saaray suuqa oo ku saleysan adduunka Howarts.
Halkan waxaan ku jirnaa iyaga, in kasta oo leh ikhtiyaarka si aad u dooratid xaqiiqda kor looqaaday kaamirada ee mobiladeena. Taasi waa, waqtiyada oo dhan waxaan ka bixi karnaa adeegsiga oo toos toos ugu tagi karnaa sanduuq isbeddelaya iyadoo loo eegayo meesha.
Khibrad aasaasi ah oo aasaasi ah
Way cadahay inay jiraan shirkado badan oo qaatay mobiladan in si fudud loo koobiyeeyo wixii shaqeeyey ama shaqeeyey. Qaado Pokémon GO tusaale ahaan, mid ku kasbata waxbadan Android marka loo eego macruufka, wuxuuna ku siinayaa midab midab leh ‘skewer’ kaasoo ah in Black Black. Waxa laga yaabo inaysan fahmin waa inay ku qaadanayso wax ka badan filim ficil ah inay soo jiitaan kumanaan; Haddaysan ahayn, u sheeg Harry Potter-kii ugu dambeeyay.
Bilaabidda aasaaska habka loo wajaho iyo kaas oo si toos ah diiradda u saaraya dilalka shisheeyaha si loo soo ururiyo wixii u gaar ah, dagaalka waxaa lagu xukumaa adigoo riixaya batoonka dabka marka aragtidayadu soo dhowaato bartilmaameedka. Sida ku xusan awooddayada inaan riixno batoonka waqtiga saxda ah, waxaan qaadan doonnaa nolol badan ama ka yar.
Markaa waan awoodnaa waxyeelo weyn gaadhsii duritaanka, waxaan awood u leenahay inaan hub ka bedesho dukaanka. Waana halkaan meesha ay bilaashka ugu imaaneyso si loo helo qodobo dhakhso badan oo aan ku horumarin doono kuwa aan haysano. Taasi waa, sanduuqyada bililiqada ee caanka ah ee nuxurkooda oo dhan.
Sanduuqyada lugta waxay u ekaayeen sidii mid madow oo MIB ah
Xaqiiqdii, ciyaarta ugu horeysa way na bari doonaan sida dukaanka waxaan ka heli karnaa hub keenaya khasaare badan kaas oo aan ku dili karno shisheeye inaga baxsada sarrifka koowaad. Kaalay, waxay ku bari doonaan haddii aad haysato baastada, in aad si dhakhso leh u kobcin karto.
Isku soo wada duuboo waad awoodaa ururiyaan wax ka badan 40 shisheeyaha adduunka ee franchise-kaan oo mid walbaa leh awoodo gaar ah. Tusaale kale oo cad oo ah sida ay asalka u yihiin markay dejinayaan isla saldhigga labada ciyaar ee kale ee Niantic Games.
Dagaalku wuxuu u maraa si la mid ah si loo leexiyo oo loo soo galo kuwa innaga yeelan doona shisheeyahayaga ka hub qaadista hubkiisa adduunka kale. Sida ficil ahaan, haddii aad ciyaartey Niantic kuwa, waad wajihi doontaa iyaga. Haa, sidookale jidadka xaafadaada waxaanan kaa filayaa inaad guurto.
Arrinta xiisaha leh ee ku saabsan kiiskan ayaa ah radius si loola dagaallamo shisheeyaha ayaa aad uga badan ka badan ciyaaraha kale ee dhabta ah ee la kordhiyay. Taasi micnaheedu waa in, uma baahn doontid inaad aad u dhaqaaqdo wax badan, sidaa darteed haddii aad caajis tahay oo ayna qabow ahayn inaad socoto maalinta oo dhan, waxay noqon kartaa ciyaartaada. Waxay u muuqan kartaa nacasnimo, laakiin waad ogtahay in Harry Potter: Wizards Unite waxaad kaliya ka heli kartaa hal ama labo kuyaal wareega kore ee ciyaarta.
Farsamo ahaan waa caadi, laakiin aan lahayn faan badan. Waxay si adag uga shaqeeyeen sidii ay u fulin lahaayeen heshiiska una sii deyn lahaayeen shirkada goose ee shirkadaas fursad u siisay inay sameeyaan ciyaar kale oo run ah. Waxaan soo bandhigi karnaa waxba kama jiraan, maadaama caadada ciyaartani ay tahay inuu si wanaagsan ugu kulmo dhammaan qeybaha ay ka kooban tahay. Tanna waa laga yaabaa inay tahay waxa ka dhigaya caajis iyo fidsan.
Ragga Madoow: Casuumadaha Caalamku waxay u yimaadaan inay isku dayaan inay raacaan tareenka xawaaraha sare dRun xaqiiqdi, laakiin inyar in yar oo fogaan ah oo dhicitaan wanaagsan ayaa qaatay. Waxay qaadataa wax ka badan ku dayashada tartanka. Sidii aan horayba u sheegnay, waa aflagaado, shirkad kalena waxay ka imaanaysaa shirkad kale, haddii ay lamid tahay kan Niantic yahay, waa hagaag, way dhici kartaa, laakiin tan? Maya, fadlan maya.
Ma jiraan wax asal ah